Dowladnimada Soomaaliya wixii ka danbeeyey dowladii uu madaxweynah ka ahaa Eebe ha naxariistee Maxamed Siyaad Bare ma jirin heshiis rasmi ah oo lagu maalgalinayo dalka
Hirshabeele waxey maanta yeelatay 20 wasiir, 20 wasiir ku xigeen iyo 17 wasiiru dowle taas oo ka dhigan iney lee yihiin 57 Wasiir, waa maamul
Waxaan nahay ummad ay garashada iyo garaadku ku yar yihiin kaba sii darane aan dareynsaneyn wadciga uu dalku maraayo iyo dhibaatooyinka naga heysta argagaxisada AL-SHABAAB. Waxay soo qoreen in Madaxweyne ...
Hurdo ayaan ka soo toosay. Sida caadada ii ah, haddii aan ammin haysto waxaan isha mariyaa wararka iyo baraha bulshda. Farriimihii la iigu soo diray Facebook waxaan ka xushay hal mid ...
Dalka Iiraan waa waddanka kaliya ee ku yaal bariga-Dhexe ee madax-bannaani haysto. Madax-bannanidaan kuma imaan si fudud ilaa haddana loogama harin. Sida waddamada kale muslimiinta Iiraan waxaa marki hore loo ...
Waxaa hada laga joogaa muddo 11 sano ah markii uu dalka Soomaaliya ka dhacay weerarkii ugu horeeyey oo ismiidaamin ah oo ay geysato kooxda Al Shabaab iyo xagjiriinta Soomaaliya ka ...
Akhristayaasha iyo akhyaarta qiimaha lahow, waxaan ku mashquulsanaa inaan soo diyaariyo maqaal ku saabsan shirkii Kismaayo waxa ka soo baxay, anigoo hore uga dhiibtay fikirkayga baryahii uu socday shirkaas, maqaalkaygana ...